Wholesale Anti-Burst Fitness Ball sy Yoga Ball ho an'ny fanatanjahan-tena, Yoga, Fahaterahana, Gym Workout Manufacturing sy Factory |XGEAR
Ball Fitness Anti-Burst sy Baolina Yoga ho an'ny fanatanjahan-tena, Yoga, Fiterahana, Fanatanjahan-tena
Ny baolina fanatanjahan-tena matihanina XGEAR dia baolina fanatanjahan-tena manohitra ny fipoahana izay tsara ho an'ny fanatanjahan-tena isan-karazany toa ny Pilates, Yoga,balance sy gym workout.Izy io koa dia baolina mahazaka setroka ho an'ny fitondrana vohoka sy ny fitsaboana ara-batana.
● FITAOVANA:Ny baolina ara-batana ara-batana antsika dia namboarina tamin'ny PVC tsy misy poizina avo lenta, izay avo lenta sy ara-tontolo iainana.Ny baolina yoga dia miavaka tsara, tsy hipoitra na hikorontana.
● Lisitry ny fonosana:Ity baolina fanatanjahan-tena ity dia ho tonga miaraka amin'izay rehetra ilainao.Ny lisitry ny Accessories dia misy: Tape fandrefesana, Fitaovana Plug ary Pump Manual.
● LALANA AVY AO AMIN'NY FOTOANA:Ny baolina ara-batana dia nandalo fitsapana henjana izay mahatanty lanja be.Izy io dia manome fanoherana tsara amin'ny zavatra maranitra ka tsy hipoitra toy ny balaonina na dia voatsindrona aza.
● Mora fehezina izy io noho ny havoana tsy mitongilana sy ny surface matte anti-slip eo amin'ny baolina.Misy torolàlana momba ny hetsika eny ambonin'ny tany hanehoana ny fomba fampiasana azy io mazava.
●SAFIDY TELO HABE:Misy habe telo misy: 55CM, 65CM, 75CM, Ny tabilao habe dia afaka manampy anao hisafidy ny habe tsara indrindra ho an'ny fanazaran-tena mahazatra na amin'ny seza birao, izay mety mifanaraka amin'ny fampiasanao.
ara-nofo PVC tsy misy poizina
loko Gray / mavokely
Safidy telo amin'ny habeny 55CM, 65CM, 75CM
Haben'ny boaty anatiny L2.95" x W1.69" x H4.17"
lanjan'ny boaty anatiny 1.35KG
Haben'ny baoritra L18.11" x W11.22" x H15.75" (8pcs/boaty)
VARIETY OF FUNCTIONS:Tsara ho an'ny fanatanjahan-tena isan-karazany ho an'ny trano sy gym toy ny Yoga & Fitness, Prenatal Health & Desk Chai.
Tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fiaretan'ny kardio, ny fifandanjana ary ny flexibilité ho toy ny baolina fanatanjahan-tena, fa afaka manatsara ny fofonaina, ny mivezivezy ary ny hozatry ny valahany ho toy ny baolina fiterahana.Ankoatr'izay, azo ampiasaina ho seza birao izy io mba hanatsarana ny fihetsika sy hanamaivanana ny fanaintainana.
teo aloha: 600D 4 Bow Bimini Top Cover amin'ny loko samihafa miaraka amin'ny tady ho an'ny sambo
Manaraka: XGEAR Mesh Ecran Rindrina misy zipper ho an'ny Canopy 10′ x 10′